HRW oo shaacisay xadgudubyada ciidamada Kenya u geystaan Soomaalida ku dhaqan xaduuda labada dalka | Xaysimo
Home War HRW oo shaacisay xadgudubyada ciidamada Kenya u geystaan Soomaalida ku dhaqan xaduuda...
HRW oo shaacisay xadgudubyada ciidamada Kenya u geystaan Soomaalida ku dhaqan xaduuda labada dalka
Cadaadiska ay ciidamada Kenya ku hayaan Soomaalida dhulkooda ay Kenya maamusho waxay keentay in dhalinyaro badan ay hubka qaataan ama ay ku biiraan Al-Shabab.
Xoggo wargeyska aanu xiganayno ee Washington Post helay waxay muujinayaan in boqolaal dhalinyaro ah oo deganaa Kutulo ku noolaa ay carro darteed Al-Shabab ugu biireen.
Sababta wargeysku waxaa uu ku sheegay inay tahay kadib markii ciidamada Kenya ay degaankaas ka xireen macalin dugsi Qur’aan maalmo kadibna meydkiisa lasoo dhigay degaan kale ee u dhaw oo la yiraahdo Caws Mudul.
Meydka macalinkaas waxaa la dhigay meel waddo dhinaceed ah.
Human Rights warbixintaan ay diyaarisay oo ay ku magacawday xad gudubyada bustaha ku hoos jira waxay sidoo kale ku sheegtay in ciidamada Kenya ay gacantooda willi lagu tuhmayo toboneeyo ruux oo aan willi raqdooda iyo ruuxdooda la helin.
Dawlada Kenya waa ay dafirtay eeda loo soo jeediyay sida ay shaaciyeen guddiga qaran ee xaquuqda aadanaha Kenya.
Haweeneyda guddigaan madaxda u ah Jedidah Waruhiu ayaa sheegtay inay jirin eeda ciidamada Kenya loo jeediyay waxaana ay intaa ku dartay inuu jirin wax xog ah oo xafiiskooda soo gaaray.
Jedidah Waruhiu waxay xustay waxay ku eedeysay dadka degan tuuladda warbixintu xustay inay diideen inay la shaqeeyaan guddi baara kiiskooda oo loo diray sidoo kalena ay ka jawaabi waayeen su’aalo arrintaan laga weydiiyay.
Wargeyska Washington Post waxaa uu sheegay inuu ogaaday in dawlada Kenya ay diiday inay la shaqayso guddiga xaquuqda aadanaha ee QM ka socday.
Dawlada Maraykanka oo ciidamada Kenya ka caawiya dagaalka ay Al-Shabab kula jirto ayaa sheegay inay ka naxeen warbixintaan waxaa ay sheegeen inay baarayaan.
Afhayeen u hadlay taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika Desiree Frame ayaa sheegtay inay ciidamada Kenya baraan illaalinta xaquuqda aadanaha.
Dadka falanqeeya arrimaha amaanka waxay aaminsan yihiin in haddii ay ciidamada Kenya sii wadaan dhibaatada ay u geysanayaan dadka shacabka ah ay cadowgooda badsanayaan waxaana ay keenaysaa in Al-Shabab ka faa’idaysto oo ay dhalinyaro badan qoraan.
Dhawr mar ayay soo baxday eeda ah in ciidamada Kenya ay ku xad gudbaan dadka shacabka ee ku nool magaalooyinka xaduuda ku yaala iyo xataa gudaha Soomaaliya.